Ahoana no hampijanonana ny fitiavanao olona tsy tia anao hiverina - Fifandraisana
Fitiavana tsy misy valiny mety fampijaliana. Tsy mora velively ny manaiky ny zava-misy fa ny olona tianao dia tsy mamerina ilay fahatsapana, na inona na inona misy, na tsy nandeha teo anelanelananareo roa.
Ny fitiavana ny olona iray tia anao any aoriana dia mety ho henjana, fa rehefa ila-tokana izy dia mety ho sarotra ny manidy sy mandroso.
Ambonin'izany dia matetika tsy takatry ny olona ny antony ampiasanao vola amin'ny olona tsy tia anao indray ny herinao, ka tsy hahazo izany fiaraha-miory rehetra izany ianao.
Mety ho sarotra ny hahafantatra ny fotoana tokony hahafoana fanantenana, ary sarotra ny mamela ny fifandraisana ary manomboka mandroso, manokatra ny tenanao amin'ireo zavatra mety hitranga vaovao.
Aza manahy anefa fa misy foana ny zavatra azonao atao mba hanampiana ny tenanao handroso sy hiala.
Mety tsy ho mora izany, fa tsy ho ela ianao dia hahita ny jiro amin'ny faran'ny tionelina.
Hanomboka hanokatra ny tenanao ianao amin'ny fifandraisana amin'ny olona iray izay hanome anao ny fitiavana mendrika anao rehetra.
Hojerentsika ny fomba ahafahanao manomboka mandroso rehefa tsy tia anao ny olona tianao, na inona na inona toe-javatra.
Na efa nifankatia tamina olona tsy mandeha ianao, dia nifandray tamin'ny olona tsy tena tia anao, na sahirana tsy ho tia olon-tiana, dia mamakia torohevitra vitsivitsy momba ny famelana mandehana.
Mandroso avy eo amin'ny crush
Nisitrika lalina aho mba handrosoana amin'ny sakaiza tsy mamaly ny fihetseham-ponao taloha ( vakio eto: Ahoana ny fomba hialana amin'ny crush: toro-hevitra 12 hanampiana anao handroso ), saingy mety ho sarotra ny miala amin'ny fifandraisana-izay-tsy nisy mihitsy.
Ny fanamby dia matetika fa tsy misy fanidiana, ka afaka miafara amin'ny mihantona foana ianao, mieritreritra zavatra mety hiova.
Fanampin'izay, ny olona manodidina anao dia tsy handray izany ho zava-dehibe raha toa ka ‘fanosihosena fotsiny’ izany, na mafy toy inona aza ny fihetseham-ponao.
Amin'ity tranga ity, ny fanekena ny toe-javatra rehetra, ny fanelingelenana ny tenanao, ary ny fahazoana misokatra ho an'ny fitiavana vaovao mety hahita anao amin'ny olona mahavariana anao.
Tapitra ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa izay tsy tia anao
Tsy mora velively ny mamarana ny fifandraisana. Fa mbola sarotra kokoa aza izany raha mbola mifankatia amin'ny vadinao ianao, saingy tonga ianao hanaiky fa tsy tia anao izy ireo.
Ary na izany aza, toa mbola afa-po ihany izy ireo hitazona ny satan'ny fifandraisanareo, na dia samy tsy faly aza ianareo roa.
manao sonia ny olon-tiako tsy tia ahy intsony
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hitadiavanao ny lohanao amin'ny toe-javatra, handamina izany ary hahita fahasahiana hamarana ny raharaha.
1. Alohan'ny hisarahanao dia diniho ny fomba ahafantaranao fa tsy tia anao izy ireo.
Ny fandraisana fanapahan-kevitra hisaraka amin'ny olona iray dia tena lehibe, noho izany dia mila maka antoka ianao fa tsy diso fotsiny ireo famantarana manaporofo fa tia anao izy ireo.
Angamba tsy mandro anao amin'ny fanomezana izy ireo na milaza aminao fa tia anao isan'andro izy ireo, na miditra amin'izay zavatra tantaram-pitiavana. Ary angamba izany no anehoanao ny fitiavanao azy ireo.
Saingy mety manana ny hafa fotsiny izy ireo fiteny fitiavana ho anao.
Ny fomba anehoan'izy ireo ny zavatra tsapany amin'ny fotoana atokisany ho anao, na ny fivoahan'izy ireo am-pifaliana ny fomba fanaovany zavatra fantatr'izy ireo fa hanampy anao.
Mizaha any ankoatry ny mariky ny fitiavana, amin'ny tena zavatra.
Saingy, etsy ankilany, aza mamikitra amin'ny mololo. Tokony hasehony anao fa tiany ianao na izany aza, na izany aza ny fomba fanaovan'izy ireo izany toa anao.
Raha manipy taolana anao fotsiny izy ireo indraindray mba hitazonana anao ho sambatra, ary sahirana ianao mahita ohatra amin'ny zavatra ataon'izy ireo ho anao, dia mety ho marina aminao ny fotoana tokony handrosoana.
2. Ampahatsiahivo ny tenanao fa mendrika hotiavina ianao.
Mendrika fitiavana ianao. Mendrika ianao ho tiana. Mendrika ianao mahatsapa fa tiana .
Ataovy ao an-tsaina izany mandritra ny dingan'ny fanapahana hevitra raha hisaraka amin'ny olona iray ary avy eo dia tena nanao izany.
Tsy tokony hipetraka amin'ny zavatra hafa noho ny olona mankafy anao ianao ary afaka mahita ny mahavariana anao.
Raha tsy fitiavana tena izy dia tsy mendrika izany.
Fantatro fa efa naheno an'izany rehetra izany ianao taloha, saingy tsara kokoa ny mitokana irery noho ny amin'ny fifandraisana tsy dia misy fahatanterahana.
25 Tsy misy Bullsh * t manamarika ny fifandraisanareo
Raha efa maty ny fitiavanao dia aza teneninao ireo angano 8 ireo
3. Diniho ny torohevitra.
Mety ho sarotra be ny manao mahitsy ny eritreritrao amin'ireto toe-javatra ireto sy manonona am-bava ary mahatakatra ny antony mahatonga anao hahatsapa fa tsy tia anao loatra ny vadinao.
Ny firesahana amin'ny matihanina dia mety ho fomba tena tsara handefasana ny fahatsapanao sy ny eritreritrao.
Mety hanampy koa ny firesahana amin'ny namana, saingy mety tsy hanana fiheverana tsy miangatra momba ilay raharaha izy ireo.
Ity dia zavatra tena ilainao ny mamantatra samirery, miaraka amin'ny fitarihan'ny matihanina.
4. Tsarovy fa tsy taratra ao aminao izany.
Na inona na inona ataonao dia aza hadino fa satria tsy tia anao ity olona ity dia tsy midika izany hoe nanao zavatra ratsy ianao.
Tsy midika izany hoe tsy tiana ianao, ary, raha izany no tadiavinao dia hahita tena fitiavana ianao indray andro any.
Ny hany zavatra tiana hambara dia hoe tsy ho anao ity olona ity.
Izany no antony tokony hanaovana veloma anao, ary sokafy izay mety ho zava-mahatalanjona mety tazonin'ny ho avy.
Mazava ho azy fa raha vantany vao notapahanao ny fifandraisana, dia handray soa ianao amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto…
Famelana ny Ex
Mahatsiravina foana ny fitiavana tsy voavaha, fa rehefa mifanindran-dàlana ny fanaintainan'ny fisarahana , mety ho traikefa mahatsiravina ny fiainana.
Fa miaina amin'ny alalany dia hataonao, ary hivoaka ianao miady.
Misy zavatra azonao atao mba hahamora kokoa ny fikirakirana ny fiainana. Azonao atao ny manampy ny tenanao hamela sy handroso, amin'izay tsy ho pine ho an'ny taloha ianao.
Na nisaraka tamin'izy ireo ianao, dia nisaraka taminao, na zavatra teo anelanelany… raha mbola tianao izy ireo, ireto misy zavatra tokony ho ao an-tsaina hanampy anao hanidy ny varavaran'ny fifandraisanareo.
1. Aza mijanona mifandray amin'izy ireo.
Mety afaka ny ho mpinamana ianareo roa amin'ny ho avy, fa raha mbola tia azy ireo ianareo ary tsy miaraka dia mila miala amin'ny fifandraisana amin'izy ireo mandritra ny fotoana manan-danja, raha azo atao izany.
Mety ho sarotra izany raha toa ka manan-janaka ianao, na miara-miasa, fa ataovy izay rehetra azonao atao mba hampihenana ny fifandraisana ary hanomezana fotoana anao manomboka miala amin'ny fitiavana .
Tsy hitan'ny maso, tsy ao an-tsaina ary izay jazz rehetra izay.
2. Ekeo fa ho asa mafy io.
Mety tsy nangataka ny hametrahana anao amin'ity toe-javatra ity ianao, fa ny dingana voalohany avelanao handeha ny olona iray dia ny fanekena fa tsy ho mora izany.
Fa manana safidy ianao:Azonao atao ny misafidy ny ho ory ary mijanona amin'ny misy anao, mahatsapa fitiavana tsy misy valiny, na afaka misafidy ny hanao tsipika ambanin'ny zavatra ianao ary hametraka ny masonao amin'ny ho avy.
Rehefa eo ianao dia ekeo ny zava-misy fa mety hanana toerana ao am-ponao foana izy ireo.
Afaka miala amin'ny fitiavana azy ireo ianao, saingy mbola ho tianao amin'ny fomba iray ihany, ary tsy maninona.
Ampahany lehibe tamin'ny fiainanao izy ireo, ka tsy mila mody tsy nisy akory izy ireo, ary mbola azonao atao ihany ny mitazona ireo fahatsiarovana tsara.
3. Manehoa hatsaram-panahy amin'ny tenanao.
Izany dia mihatra amin'ny karazana fitiavana telo tsy manam-paharoa.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy manantena ny tenanao ho sitrana mandritra ny alina.
Manantena ianao fa hisy fotoana sarotra be ary fantaro fa tsy hiatrika ny zava-drehetra ianao amin'ny fomba izay, angamba, amin'ny tontolo mety.
Mila mampiseho fitiavana matotra ianao. Ataovy ireo zavatra mahasambatra anao, mandany fotoana amin'ireo olon-tianao, manaova fotoana fialan-tsasatra, manao fanatanjahan-tena, misakafo tsara (fa aza adino ny sôkôla - afaka manampy tokoa izy io).
4. Manaova veloma ny hoavin'ny nofinofinao, ary mifalia amin'ny mety hitranga.
Mety ho elaela ianao vao hahatsapa ho faly amin'ny mety ho zavatra mialoha anao, fa zava-dehibe ny mampatsiahy anao fa misy zavatra mety hitranga, ary tontolo iray manontolo no nisokatra ho anao.
Mila mihavana amin'ny ho avy noeritreretinao ho an'ny tenanao taloha ianao, ary hanaiky fa tsy nisy mihitsy izany ankoatry ny eritreritrao.
Tsy zavatra tsy azonao io, satria tsy tena izy.
5. Miaina amin'izao fotoana izao.
Mahafinaritra ny mientanentanana momba ny hoavinao, fa ny iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra tokony ianaranao avy amin'ny toe-javatra toy izany dia ny miaina amin'izao fotoana izao, fa tsy mametraka ny fanantenanao amin'izay mety hitranga.
Tiavo ireo olona manan-danja amin'ny fiainanao amin'ny fonao rehetra, ataovy lohalaharana ireo zavatra rehetra manatanteraka anao sy mitaona anao, ary aza mieritreritra izay mety nisy, na izay mety ho.
ahoana no ilazana amin'ny olona tianao izy ireo
ny fomba ahafahana misimisy kokoa ara-pientanam-po
Teny nalaina avy amin'ny winnie the pooh
ahoana no hahalalana raha misy tovovavy kely tia anao
antsoina hoe manome tsiny olon-kafa noho ny olanao